Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish ichashandisa Linux 5.15 | Linux Addicts
Mazuva maviri apfuura takadaro maungira enyaya inotaura izvozvo Ubuntu 22.04 inogona kuiswa pane 4GB Raspberry Pi 2. Nhasi tinofanira kutaura zvakare nezve sisitimu yekushandisa yakagadzirwa neCanonical, asi panguva ino nezve kernel yaichashandisa. Jammy Jellyfish, codenamed 22.04, ichave iri LTS kuburitswa uye, zvisingashamisi, ichashandisa ichangoburwa Yenguva Yenguva Yekutsigira kernel iripo, kunyangwe isati yawana iyo label panguva ino.
Linux 5.10 yaive kuburitswa kweLTS, asi pakutanga, kana ndikarangarira nemazvo, yaizongotsigirwa kwemakore maviri. Apo nharaunda yakawedzera uye kugadzirisa kwakachengetedzwa, rubatsiro rwakawedzerwa. With Linux 5.15 isu tiri zvakanyanya kana zvishoma mune zvakafanana: ichatsigirwa kwenguva yakareba kupfuura yakajairwa shanduro, asi ikozvino kwete kureba se5.10. Uye mu kernel.org Haisati yamakwa seLTS parizvino, "Yakagadzikana".
Ubuntu 22.04 ichasvika neGNOME 42
Parizvino, uye kana zvinhu zvikasachinja sezvavakaita ne5.10, Linux 5.15 ichatsigirwa kusvika Gumiguru 2023. Gore nehafu yerutsigiro haina kuwanda kweRubatsiro Rwenguva refu kuburitswa kweUbuntu, asi imwe sarudzo. kuve kushandisa Linux 5.16 -5.17, inotsigirwa inenge mwedzi mitatu. Linux 5.15 yakaburitswa pakupera kwe Gumiguru 2021, saka haizove shanduro yemazuva ano, asi yaive sarudzo ine musoro uye handifungi kuti yakashamisa chero munhu.
Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish iri mukusimudzira izvozvi, nekuburitswa kwakagadzikana kuri kuuya muna Kubvumbi 21st. Pakati pezvitsva zvayo, zvinotarisirwa kushandisa GNOME 42 (ikozvino uri kushandisa GNOME 40) uye yazvino vhezheni yelibadwaita, asi mashoma maapplication ndiwo achaiswa zvizere kana kuti akavakirwa paGTK4. Ichatsigirwa kwemakore mashanu, saka kana vakasawedzera rutsigiro rweLinux 5.15, ringava zano rakanaka kuvandudza kernel pakupera kwa2023.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Hapana zvinoshamisa: Ubuntu 22.04 ichashandisa Linux 5.15
Kwete. Hapana kushamisika, asi hakufaniri kuva nechero, nokuti tiri kutaura nezve lts iyo inobva pakugadzikana kwakachena, pakuva dombo uye nokuda kweizvozvo, zvinoshamisa hazvigoneki. Ingori modhi yavo yebudiriro.